Madixii shirkadda Boeing oo shaqada looga eryay sababo la xiriira "burburkii" diyaaradda 737 Max - BBC News Somali
Madixii shirkadda Boeing oo shaqada looga eryay sababo la xiriira "burburkii" diyaaradda 737 Max
Shirkadda sameysa diyaaradaha ee saldhigeedu yahay dalka Mareykanka ee Boeng ayaa shaqada ka eriday madaxa shirkaddaasi, Dennis Muilenburg, si loo badbaadiyo sumcadda shirkaddaasi ka dib markii laba jeer oo ay burburtay nooc ka mid ah diyaaradaha ay shirkaddaasi sameyso ee 737 Max.
In kabadan 340 qof ayaa shilalkaasi ku dhintay, waxaana shilalkaasi ka dhashay shaki ah in ay jirto cillad weyn oo haysata nooca diyaaraddaasi, waxaana shirkaddaasi lagu eedeeyay in ay faa'iidadeeda ganacsi ka doorbidday badqabka dadka isticmaala diyaaradaha ay sameyso.
Shirkaddaasi Boeing ayaa baaritaanno iyo cadaadis ba'an la kulmeysay tan iyo markii laba diyaaradood oo ah nooca 737 Max ay burbureen muddo shan bilood gudahood ah, kuwaa oo ku kala burburay waddamada Induniisiya iyo Itoobiya.
Isticmaalka diyaaradaha nooca 737 Max ay markiiba la hakiyay dunida oo dhan.
Dhammaadkii bishii Septembar ee sanadkan, baaritaan la sameeyay ka dib waxaa lagu ogaaday in diyaaradaha nooca Boing 737-ng lagu arkay dildillaac qaybaha sare ee diyaaraddaasi.
Wakaaladda dalka Mareykanka u qaabilsan dabagalka duullimaadyada ayaa sheegtay "diyaarado in mudda ah shaqeynayey marki la damcay in dib u habeyn lagu sameeyo in lagu arkay dildillaac ku yimid jambiga kore ee diyaaradaha".
Shaqaalaha shirkaddaasi ayaa sidoo kale sida la sheegay sanadkii 2016 isu diray farriimo ku saabsan cillad ay ku arkeen diyaaradda nooca 737 Max oo ahayd noocii labada jeer galaaftay nolasha boqolaal qof.
Waxa uu sheegay in "isaga oo aan is ogayn" uu been ugu sheegay hay'adda ilaalisa badqabka diyaaradaha ee Mareykanka.
Shilkii ugu dambeeyay ayaa waxaa ku burburay diyaarad laga leeyahay dalka Itoobiya oo nooceedu ahaa 737 Max, waxaana shilkaasi ku dhintay 157 qof.